Tag: akpaka ahịa akpaaka | Martech Zone
Akpado: akpaaka ahịa ahịa ekwentị
Friday, April 13, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
eMarketer na-atụ aro na naanị ndị ọrụ ịntanetị ga-abawanye site na 32.1 nde ruo 52.3 nde n'etiti 2015 na 2021 N'afọ gara aga naanị, iji naanị ịntanetị eme ihe site na 36.6 nde ndị ọrụ gaa na 40.7 nde ndị ọrụ Omenala dijitalụ ahịa a na-echekarị ma hazie maka onye ọrụ desktọọpụ na-anọ ọdụ; dị ka a N'ihi ya, o nwere adịghị ike na mobile-naanị ọrụ. N'ezie, otu akụkụ dị mkpa bụ njegharị ala ha. Nke ahụ bụ ebe akpaaka azụmaahịa mkpanaka (MMA) batara.
Appboy: Ghọta, Nwalee ma soro ndị ọrụ ekwentị
Tọzdee, Nọvemba 7, 2013 Wednesday, July 23, 2014 Douglas Karr
Gburugburu ebe obibi igwe na-agbawa agbawawo ihe karịrị 1 nde ngwa n'ime afọ atọ gara aga. Ndị ụlọ ọrụ na-agbasi mgba ike inweta nnweta ndị ọrụ dị elu na ọnụego njide dị ala. Ihe na-erughị 60% nke ngwa ngwa ekwentị na-enye ezigbo nloghachi na itinye ego. Appboy bu ihe eji eme data nke na enyere ndi na ere ahia ngwa ahia aka imeputa profaịlụ onye oru ha na ndi mmadu na-ege nti, wee nye ha ikike nke ngwa ahia ngwa ahia: Nkwuputa ihe omuma na enye ozi di nkpa.
Elele nke Mobile Marketing Automation
Otu ebumnuche kachasị elu maka ndị otu bụ ịhazi ahịa na otu ndị ahịa ka ha wee na-ekwukọrịta ma na-etinye usoro ọrụ ha n'ụzọ dị irè karị. N'aka nke aka, ahia choro oba akwukwo nke ihe ndi ozo na usoro ndi ndu, ebe ahia choro obi iru ala na ahia ahia na aka ha. Agbanyeghị na ngalaba ndị a nwere ike ịdị iche, ha ka nwere njikọta ọnụ. Nke a bụ ebe echiche nke